MELES ZANWI OO MARKII U HOREYSAY KA SANQADHIYAY IN UU XILKA KA DEGAYO | Toggaherer's Weblog
Ra’iisal Wasaaraha dalka Itobiya Meles Zenawi ayaa wareysi uu siiyay jariidad ka soo baxda dalkiisa ku sheegay in ay tahay xiligan markii ay talada dalka qaban lahaayeen dadka u heelan.
Hadalka Ra’isul wasaarahe Melez oo Hogaaminayey Dalkaas ku dhawaad 18 ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in uu xilka ka degayo.
Meles Zenawi waxa uu u sheegay wargayska Financial Times ee dalkiisa ka soo baxa in uu xilka intaas uga dhan yahay Wargayska ayaan laga soo xigan sababata keentay in uu xilagan Ra’isul wasaaraha Ethiopia xilka ka dego.
Laakiin Xil ka degistiisa Ra’isul Wasaaraha ayaa wax ay timid Xilli Dhawaan Dalkaas lagu xir xir Dad damacsanaa in ay inqilaaban oo gaaraya ila 30 Qof Kuwaas oo markii danbe xabsiga la wada dhigay.
Meles xil ka degistiisa uu ku baaqay ayaa waxa ay dhici kartaa marka ay isku racaan Xisbiga kacaanka Diqmuraadiyada dalkiisa ee EPRDF oo ah kuwa haatan Hogaaminaya dalkaas sida uu Wargeyska u sheegay Melez ”Waxaa ku Boorinayaa in uu yahay mid run ah oo la qaato hadalkayaga sida loo qaato hadalada kale”.
Hadalkiisa isaga oo sii wata ayuu yiri ”Waxaan qabaa in aan ka soo kabanayno isfahan guud La’aan, Horumar la sameeyo in aysan ku xirnayn iscasilaadayda iyo in waxa aan waligay u dagaalami jiray aan maata uga tagayo anoo wax taageero ah siinayn ee waan idinla jira wakhtikasta hadii ay dhaboodo in aan xilka ka tago.” ayuu Meles.
Meles oo u ahaan jiray nin si weyn Mucaarad ugu ah Xukumadii Mengistu ahaana hogaamiyihii Jabhada Marxist ee dalka Itoobiya ayaa xukunka dalka Afganbi ku qabsaday 1991, markaas oo uu dalka ka talinayay Mengistu Haile Mariam.
Meles waxa uu talada Dalkiisa mar labaad qabtay, kadib markii ay xisbigiisu si Codbuuxa ah ka heleen Baarlamaanka dalkaasi oo si weyn ugu taageeray doorashada madaxtinmo ee 2005.
Meles waxaa uu ku booriyay xisbigiisa in aysan ahayn kuwa hub qaata hadii uu xilka isaga dego ee ay la shaqeeyaan Dowlada dhalata si dalka Itoobiya uu u noqdo mid Mustaqbalkiisa sii shaqeyo.
“Waxaan ka hadlayo ma han aniga oo kaliya in aan xukunka hayo lakiin waxaa loo bahan yahay hogaamiyaal I badala, mana ahan in aan hub iyo dagaal halgan lagu soo galo oo markaas xukun lagu helo ay samaynayso micno buuran ee waa in xalka iyo horumarka dalkeenu noqdaa mid ka fiican kan maata aynu joogno, sidaas waxaa waraysigiisa FT ku soo afjaray Hadalkiisa Ra’isul wasaaraha Itoobiya Atto Melez Zenawi.